Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Ihe dị ọhụrụ na agwaetiti nke The Bahamas na February
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Bahamas na-arịọ ndị njem na-achọ oge ezumike oyi na February ka ụlọ oriri na ọ andụ andụ na-aga n'ihu imeghe agwaetiti ndị ọzọ na ebe ntụrụndụ na-enye ịhụnanya ụbọchị ịhụnanya. N'ebe obibi ohuru ohuru na ọdụ ụgbọ mmiri na ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ na-enye nyocha COVID na saịtị, The Bahamas na-aga n'ihu na-eme mgbanwe maka iwu nchekwa iji nye ndị ọbịa ezumike ezumike Bahamian na-enweghị nchekasị.
Milọ oriri na ọanụ Onụ Bahamian na-enye ule na saịtị - Hotlọ oriri na ọelsụ acrossụ n'ofe Nassau Paradise Island, Grand Bahama Island na Out Islands na-enye nyocha saịtị COVID maka ndị ọbịa dịka iwu chọrọ njem mba ụwa ọhụrụ nke US. Baha Mar, Atlantis na Osimiri Ocean ndị a bụ ụfọdụ ụlọ oriri na nkwari akụ na ebe ntụrụndụ nwere nyocha saịtị na Nassau Paradise Island tinyere ụlọ oriri na ọ Outụ Outụ Out Island Caerula Mar Resort na Abaco Beach Resort. Maka ndepụta zuru ezu nke saịtị nyocha COVID na usoro ọhụụ na ntinye ọhụụ, gaa na Bahamas.com/TravelUpdates.
SLS na Rosewood Baha Mar ka imeghe March 2021 - Baha Mar ga-abanye na njedebe ikpeazụ ya nke imeghe na March 4 site na imeghe Rosewood na SLS. Ebe obibi Nassau mbụ nabatara ndị ọbịa na Grand Hyatt Baha Mar na Disemba 2020.
Hotel Harbor Island's Rock House Hotel Na-ebupụta Villa - Houselọ nkwari akụ Rock House na Harbor Island amalitela Rock House Rental Villa, ebe ezumike ezumike nkeonwe yana ihe niile eji enyere ndụ aka na họtel. Ọ bụ ezie na ụlọ oriri na nkwari akụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ remainụ ka na-emechi emechi, ihe ruru ndị ọbịa 20 nwere ike ịnụ ụtọ ụlọ ezumike nke ndị ọrụ zuru oke na-abịa na onye isi nri na onye nlekọta iji lekọta ndị ọbịa mkpa ọ bụla. Ntinye akwụkwọ dị na Ugochukwu.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ emerald Bay Emerald na -amalite -Na Sandals Emerald Bay Resort si imeghe na February 24, ndị gọọmenti nwere ike ịnụ ụtọ ihe omume Greg Norman na-emeri. A na-ahụkarị Sandals Emerald Bay Golf Course dị ka otu n'ime usoro mmụta kachasị mma na Caribbean, yana oghere 18 guzobere na mmiri Exquoas 'mara mmiri turquoise na ụsọ osimiri ọcha.
Breezes Bahamas nabatara ndị ọbịa na be Smart + Safe Initiative - Mgbe ọ mepere ọzọ na Disemba 2020, Oké ifufe Bahamas ejiriwo nabata ndị ọbịa ya nke ọma Nwee Smart + Nchekwa ebumnuche Ebumnuche ahụ na-enye ndị ọbịa na ndị otu otu usoro ogbugba ndu gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ihe mkpuchi ihu na ihe ndị ọzọ.
Atlantis Di na Nwunye Getaway ngwugwu - Di na nwunye nwere ike ịhazi ịlụ di ma ọ bụ nwunye Bahamian Atlantis nke a inepo Day. Soro onye gị na ya na-eme oriri mgbe ị na-eri nri ụtụtụ kwa ụbọchị, nri abalị dị jụụ maka mmadụ abụọ, na ndenye ọpụpụ oge.
Cape Santa Maria Beach Ndị Ezumike Ezumike - Izere ka Cape Santa Maria Beach Resort na Long Island maka ihunanya ịhụnanya. Zuo ike na ịhịa aka ekele, ịnabata mmanya na ọtụtụ mgbe ị na-ehi ụra abalị atọ ma ọ bụ karịa.
Breezes Bahamas Oge Oyi - Breezes Bahamas na-enye ndị ọbịa ego ego ruru 53% maka njem njem nke February 28, 2021 gbara dị ka akụkụ nke ya Oge Ohia.